Monday June 24, 2019 - 10:56:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbixin cusub oo soo baxday ayaa daaha ka faydaysa sida mas'uuliyiinta dowladda Suudaan uga macaashaan kumanaanka askari ee ay udireen dalka Yemen
Tirada ciidanka Suudaan ee ku sugan dalka Yemen ayaa gaaraya illaa 30 Kun oo askari waxa ayna kukala sugan yihin dhowr gobol, balse intooda ugu badan ayaa ku sugan xuduuda Sacuudiga iyo Yemen, halkaas oo ay maleshiyadka Shiicada ah kula dagalamaan.
Mid kamid ah Askarta Sudaniyinta ah ee la geeyey dalka Yemen, ayaa ka sheekeeyey xaalada ay ku nool yihin, wuxuuna sheegay in Askari kasta oo katirsan military-ga Sudan uu tartan ugu jiro sidii halkaas loo geyn lahaa sababo ku aaddan dhaqaalaha faraha badan ee kasoo gala joogitankooda dalka Yemen.
Waqtigan la joogo Military-ga Suudaan, wuxuu u diray wadanka Yemen illaa 5 guuto oo ciidan ah, guutadiina waxa ay ka kooban tahay 5 Kun o askari, taas oo macnaheedu yahy in Suudan ay wadankaas ka joogaan ciidan ka badan 25 Kun oo Askari.
Inta badan ciidankana yaa lasoo bedelaa Sanad ama laba sano kadib waxaana halkaas la geeyaa ciidan hor leh si ay usii wadan shaqadii uu isbaheysiga ka hayey dalka Yemen, waana markii ugu horeysay oo madaxda dalka Suudaan ay qiraan in ciidan sidaa u fara badan uu ka joogo dalka Yemen ee ay dagaaladu halakeyen.
Askariga caadiga ah ee ka socda dowladda Suudaan ayaa bil walba mushaar uqaata lacag dhan 2200 oo dollar halka saraakiishu ay qaataan lacag kor udhaafaysa 5000 oo dollar.
Jeneraal Maxamed Xamdaan oo ah ku xigeenka madaxa golaha Melleteriga Suudaan ayaa markii ugu horraysay sheegay in ciidamo gaaraya sodon kun oo askari ay ka joogaan wadanka Yemen ayna diyaar u yihiin in ay ciidamo dheeri ah diraan.
Khubarada ku takhasusay arimaha ciidanka ayaa qaba in dhawaqa kasoo yeeray Jeneraal Xamdaan uu ahaa sir ka baxsatay Sarakiisha inqilabka, tirada ciidamada ka howl galaya dalka Yemena ay ahayd mid qarsoodi ah oo dadku aysan waxba kala socon, inkastoo tira badnaanta ciidanka Sudaaniyiinta aysan saaxada waxba ka badalin, kuwa ugu badan ee dagaalada galay dhigoodana uu daadanayana ay yihin kuwa Imaaraatka iyo Sucuudiga.
Dowladaha Imaaraatka Carabta iyo Aala Sacuud ayaa bil walba lacago boqolaal Milyan oo dollar ah Suudaan kusiiya dagaalka Yemen waxaana xusid mudan in dowladahan ay halkoodi kasii wadeen taageeradii ay siinayaan Suudaan kadib markii Inqilaabka lagu riday Al Bashiir.
Weerar Gaari looga qabsaday ciidamada Koonfur Galbeed oo ka dhacay duleedka Buurhakaba.